Maalinta: Sebtember 9, 2019
Gaadiidka in loo qaado Isbitaalka Gobolka Türkoğlu
Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalada Türkoğlu Center Center oo ku saabsan dhismaha buundada ka sarreysa Isbitaalka Gobolka İmalı Creek Türkoğlu illaa mitirrada 2200 150 ayaa hoos u dhici doona. Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalo Xeebeedka İmalı Creek ee Degmada Türkoğlu [More ...]
Degmada Denizli Metropolitan Municipal, 2019-2020 sanad-waxbarasheed ay ugu wacan tahay bilowga ardayda “Denizli Student Card vize digniin si aad u hesho fiiso. Xilliga fiisaha 30 wuxuu dhacayaa bisha Sebtember 2019. Denizli Metropolitan Municipal, magaalada gudaheeda [More ...]
Booliska Gaadiidka ayaa soo kormeeray Alanya
Waaxda Gaadiidka Boliska ee Magaalaweynta Antalya waxay sii wadaysaa kormeerka joogtada ah ee Alanya. Baadhitaanno ayaa lagu fuliyay qaybo kala duwan oo Alanya ah iyadoo lala kaashanayo Booliska Gaadiidka Bilayska ee Antalya iyo Waaxda Laanta Taraafikada ee Alanya. [More ...]
Sanqadha Geeska iyo Bareega ayaa beddeli doona Sanqadha Kala-baxa ee Ankara
Mansur Yavaş, Duqa Magaalada Ankara Magaalo Weyn, ayaa u yimid marxaladda ugu dambeysa dhismaha “Baaskiilka Baaskiilka” gudaha N 30 Agoosto Victory Park en oo uu furay 30 Maalinta Guusha ee Agoosto. “Mashruuca Wadooyinka Baaskiilka” ee Magaalada Waaweyn [More ...]
Talaabo la taaban karo ayaa loo qaadayaa xaafada Konya, mid kamid ah talaabooyinka la qaaday iyadoo la tixgalinayo sanadka Konya ee 50 sanadka soo socda. TCDD iyo Dowlada Hoose ee Magaalooyinka Konya waxay dhisi doonaan shirkad wadaag ah waxayna ka shaqeyn doonaan khadka magaalada '15 THOUSAND PASSENGERS' MAALINTA Konya Gar-OSB [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuxuu dhowaan ku dhawaaqi doonaa mashruuca Channel Istanbul! Sida ku xusan eedeymaha daqiiqada ugu dambeysa ee eedeymaha xiisaha badan ee mashruuca waalan ee Istanbul Istanbul ayaa soo gabagabeeyay shaqada! Madaxweyne Erdoğan wuxuu ku adkaystay Channel-ka CHP [More ...]
Socdaal Dheeri ah Ilaa Habeen Dambe sababtoo ah İZBAN Fair
6-15 88 in la qabto Sebtember illaa Sebtember. İZBAN waxay abaabuli doontaa duulimaadyo dheeri ah illaa iyo dambe ee habeenkii sababtoo ah Fairzmir International Fair. İZBAN, 6 Sebtember 2019 wuxuu furi doonaa albaabadiisa Jimcaha inta lagu gudajiro Bandhigga Caalamiga ah ee İzmir, [More ...]
Dadka degan xaafada Yaxya Kaptan ayaa lagu eedeeyey inay mar labaad ka gudbaan khadka taraamku markii labaad waxay la kulmeen dadka deggan xaafada loo yaqaan 'Pennic' Sida la ogsoon yahay in xaafada Yaxye Captain ee dadka degan xaafada lugeynaya wadada baaskiilka. [More ...]
150 ee Kayseri. Mashaariicda la hirgalin doono lana fulin doono sanadka 2010
Duqa Magaaladda Kayseri Memduh Büyükkılıç, Dawlada Hoose ee Magaalada 150. Wuxuu siiyey macluumaad ku saabsan mashaariicda sanadka. Bixinta Hawada Melikgazi'de, Kocasinan'da Keykubat waxay muujiyeen inay u dhaqmeen dhismaha Nation Garden Büyükkılıç, '' Sidoo kale, [More ...]